Guddiga Doorashooyinka Qaranka oo doonaya iney haweenku fahmaan ka qeybgalka siyaasadda dalka – Kalfadhi
Guddiga Madaxa-banaan ee Doorashooyinka Qaranka ayaa kulan isugu keenay qaar ka mid ah haweenka ku nool magaalada Baydhaba ee Gobolka Baay. Kulankaas waxa uu ujeedkiisu ahaa sidii haweenka loo fahamsiin lahaa ka qeybgalka siyaasadda iyo doorashooyinka dalka, marka la gaaro 2020-ka.
Marka laga soo tago haweenka ku dhaqan Baydhabo ee kulankaas ka qeybgalay, waxaa kaloo barnaamikaas qeyb ka ahaa xubno ka socday Ururka Haweenka Qaranka, kooxaha u ololeeya arrimaha haweenka, mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka Koofur Galbeed Soomaaliya (KGS), oo ay kamid tahay Wasiirka Haweenka iyo Xuquuqul Insaanka Maamulkaas iyo Guddiga Madaxa-anaan ee Doorashooyinka Qaranka.
Guddoomiyaha Guddiga Madaxa-banaan ee Doorashooyinka Qaranka, Xaliima Ismaaciil Ibraahim (Xaliima Yareey), ayaa kulankaas ka sheegtay in guddigu uu qaadanayo doorkiisa ku aadan sidii uu haweenka Soomaaliyeed uga dhaadhicin lahaa in ay ka qeyb noqdaan doorashooyinka dalka.
“Kulankeena maanta waxa uu ku saabsan yahay mas’uuliyadda guddiga saaran in uu guto, oo haweenka waxyaabaha ka quseeya doorashada, sida in ay noqdaan dad firfircoon oo wax soo doorta ama in ay ka qeybgalaan doorashooyinka dalka, ayaan rabnaa inaan isla qaadano” ayey tiri Guddoomiye Xaliima Yareey.
Xaliima waxay, sidoo kale, sheegtay in uu jiro sharcigii doorashooyinka dalka, kaas oo ay tilmaantay in uu weli qabyo yahay, lana doonayo in la dhameystiro. “Markii sharcigaas la sameynayey waxaa si dirqi ah oo qasab ah loogu daray in haweenku ay yeeshaan 30% (Soddon Boqolkiiba) ka qeybgalka doorashooyinka, marka waa in la xaqiijiyaa arrinkaas” ayey tiri Xaliima Yareey.
Guddoomiyaha Ururka Haweenka Qaranka, Batuulo Axmed Gaballe, oo kamid ah xubnaha ka qeybgalay kulankaas, ayaa sheegtay in loo baahan yahay in la hubiyo qoondada haweenka ee ka qeybgalka siyaasadda, taas oo ay sheegtay in lagama maarmaan ay tahay in dastuurka lagu qoro, “maadaama” bey tiri “aysan hadda ku qorneyn”.
“Ka qeybgalka doorashadu waxay u baahan tahay in dadaal adag loo galo, waxaana lagama maarmaan ah in dastuurka dalka lagu qoro qoondada haweenka ee boqolkiiba sodonka ah, si loo xaqiijiyo ka qeybgalka siyaasadda ee haweenka” ayey tiri Guddoomiyaha Ururka Haweenka Qaranka, Batuulo Axmed Gaballe.
Wasiirka Haweenka iyo Xuquuqul Insaanka Maamulka Koofur Galbeed, Nadiifo Xaaji Carmiye, ayaa gaba-gabadii kulanka ka sheegtay in haweenka Soomaaliyeed looga baahan yahay in ay ku baraarugaan sidii ay uga qeyb qaadan lahaayeen dhammaan hawlaha ka socda dalka, oo ay ka qeybgalka siyaasaddu kamid tahay.
“Waa muhiim in sharciyadda dalka lagu xaqiijiyo qoondada haweenka ee ka qeybgalka siyaasadda, balse waxaa arintaas ka muhiimsan in dumarku ay u soo jeestaan sidii ay uga qeybgali lahaayeen siyaasadda” ayey tiri Wasiirka Haweenka iyo Xuquuqul Insaanka KGS, Nadiifo Xaaji Carmiye.